Warbixin: Waa maxay sababta Booqashada boqorka Sacuudiga ee Ruushka? | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home ARRIMAHA SIYAASADDA Warbixin: Waa maxay sababta Booqashada boqorka Sacuudiga ee Ruushka?
Boqorka dalka Sacuudi Carabiya Salmaan bin Cabdul Asiis ayaa ka ambabaxay caasimadda Riyadh, isagoo booqanaya dalka Ruushka.
Waa booqasho rasmi ah oo laga bilaabo maanta oo Arbaco ah ilaa iyo Toddobada bishan ku joogi doono dalka Ruushka.
Aqalka looga taliyo dhulwaynaha Russia, ee Kremlin-ka ayaa sheegay in Booqashada boqorka Sacuudiga ay tahay mid labada dowladood ay ku hagaajinayaan xiriirka labada dal.
Kremlin-ka waxaa uu sheegay in Ajandaha ugu sareeya Booqashada boqorka ay tahay inay labada dowladood samaystaan wadashaqayn dhanka militariga ah, taasi oo aan labadaasi dhexmarin tan iyo intii Sacuudigu xuriyadda uu qaatay 1920 yadii.
Wasiirka arrimaha dibadda Rushka Sergei Lavrov ayaa sheegay in wadahadolo uu boqorka la yeelan doono madaxwaynaha Ruushka Vladimir Putin, islamarkaana ay ka hadli doonaan arrimo badan oo ay ka mid yihiin ammaanka Barriga dhexe.
Booqashadan waa tii ugu horaysay boqor kursiga ku fadhiya uu booqdo dalka Ruushka.
Ruushka iyo Sacuudi Carabiya waxaa ay ku kala aragti duwan yihiin arrimaha Suuriya.
Waa maxay sababta Booqashada boqorka Sacuudiga?
Dib-lumaasiyaddu waa wax ay yirahdaan waa isticmaalka hadal u gaar ah oo aan jirin ama aan la rabin in la sameeyo.
Waxaad mooddaa in hadalkaasi markan uu yahay mid run ah
Wasiirka arrimaha dibadda dalka Sacuudiga ayaa Booqashadan ku tilmaamay mid “Taariikhi” ah.
Sacuudi Carabiya iyo Ruushka ayaa waxaa ay sanado badan ahaayeen kuwo aan xiriirkooda la qiyaasi karin. Waa labada dal ee soo saara Saliidda ama shidaalka ugu badan, hadana leh kala bar saliidda caalamka.
Dalka Suniga ah oo Sacuudiga uu ka mid yahay waxaa ay wali ku jiraan qarowgii ugu dheera ee soo mara taasi oo ah jabka su’aal la’aan kasoo wajahay dagaalka ka soconaya dalka Syria, taasi oo sababta ugu wayn uu leeyahay Ruushka maadaama uu difaacay maamulka Bishar al-Asad.
Dowladda Syria waxaa ay sheegtay 92% ay dib ula wareegtay dhulka Syria islamarkaana ay ka guulaystay suniyiinta hubaysan ee Sacuudiga iyo dalal kale oo carbeed ay maalgalinayeen kuwaasi oo dagaal kula jiray dowladda Syria.
Dmitri Peskov, afhayeenka Kremlin-ka ayaa sheegay in booqashadan ay hagaajin doono wax badan oo dan u ah labada dowladood.
Heshiis ku saabsan Syria
Dowladda Sacuudiga ma sii awoodi doonto inay dalbato in Asad uu kursiga faarujiyo.
Waxaa sabab u ah in wali Ruushka uu garab taagan yahay xukuumadda Syria, isagoo sanadkii Saddexaad militari ahaan xaadir ku ah dalkaasi, taasi oo keentay in Bishaar uu awoodo in maamulkiisa uu 92% ballaariyo.
“Xaalku ma ahayn sidii uu ahaa inta Ruushka uusan galin Syria, Saddex sano ka dib wax badan ayaa is badalay, waana sababta keentay in dowladaha Gobalka ay dareenkooda usoo weeciyaan dhanka Ruushka ” sidaa waxaa yiri Anatoly Tsiganok, oo ah khabiir militari oo fadhigiisu yahay magaalada Moscow, xili uu la hadlayay television-ka ALJAZEERA English.
La taliye ka tirsan taliska Ruushka ee Kremlin, ayaa waxaa uu qabaa in socdaalka boqor Salmaan ay tahay wax la xiriira jabka iyo dharbaaxada la soo daristay mucaaradka Syria oo Sacuudiga uu maalgaliyo.
Boqorka ayaa laga yaabaa in Putin uu ka baryo inuusan burburin dhammaan mucaaradka, isaga oo sidoo kale laga yaabo inuu fudadeeyo go’aanka uu ka taagan yahay in Syria laga sameeyo goobo nabdood kaasi oo isku raaceen Ruushka, Turkiga iyo Iiraan, sidaa waxaa aaminsan Sergei Markov, oo ah khabiir ka tirsan Machadka Daraasaadka Siyaasadda Moscow.
Hadii ay taasi dhacdo waxaa laga yaabaa in Ruushka uu iska daacyo dhaleecaynta uu Sacuudiga ku hayo taasi oo ku aadan dagaalada dalka Yemen.
Heshiiska la filayo
Boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdul Asiis iyo madaxwaynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa la filayaa inay saxiixdaan heshiis hub Sacuudiga uu kaga iibsanayo Ruushka, kaasi oo ay ku kici doonto adduun gaaraya $3.5bn (Saddex bilyeen iyo bar dollar).
Sacuudiga ayaa u dhaarsan inuu helo gantaalada balaastiga ah iyo Sistamka Difaaca Cirka ee dalka Ruushka, kuwaasi oo weeqay awooddii Sacuudiga uu ku lahaa Syria.
Sacuudiga ayaa sidoo kale diyaar la ah adduun gaaraya $80bn oo uu ku samaysanayo Nuclear-ka rayidka ah, taasi oo hadii ay u suura gasho ka dhigaysa dowladda labaad ee Barriga dhexe oo haysata nuclear-ka rayidka ah.
Xiriirkii hore ee ka dhaxeeyay Sacuudiga iyo Ruushka ayaa ahaa mid wanaagsan. Ruushka oo xilligaasi ahaa Hanti-wadaag ayaa waxaa uu noqday dowladdii ugu horaysay ee aqoonsata madaxbanaanida Sacuudiga sanadka markii uu ahaa 1926 kii.
Wax yar ka dib xiriirka wanaaga ku bilowday waxaa aasay boqorkii la oron jiray Khalid, kaasi oo cambaareeyay in Ruushka uu rabay in mabda’a Hanti-wadaaga uu ku faafiyo Sacuudiga. Taasi waxaa ay keentay in Ruushka dareenkiisa uu u weeciyo Barriga Yemen, oo xiligaas ahaa dowlad madaxbanaan. Ruushka ayaa sidoo kale Sacuudiga kula tartamay dunida Islaamka, isagoo taageeray waddaniyiinta dalalka Syria, Ciraaq iyo Masar.
Intaas ka dib waxyaabaha ugu waa wayn ee labadan dowladood dhexmaray ayay ahayd in Sacuudiga uu taageero hiil iyo hooba leh uu siiyay mucaarad gooni u goosad ahaa oo ka dagaalamayay Chechnya iyo jamhuuriyado kale oo wali ka tirsan Ruushka.
Previous articleMadaxwaynaha Soomaaliya oo gaaray dalka Suudaan (Sawiro)
Next articleKurdiyiinta waa dad noocee ah?